Jamie Carragher Oo Hadal Muran Dhaliyay Sheegay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Jamie Carragher Oo Hadal Muran Dhaliyay Sheegay
Jamie Carragher Oo Hadal Muran Dhaliyay Sheegay
Jamie Carragher ayaa sheegay in Luis Suarez uu sabab u noqday in LIverpool ay ku guuleysan weyso horyaalka Premier League markii uu qaniinay Branislav Ivanovic, isagoo sheegay in kufitaankii Steven Gerrard uu sabab u noqonin guuldaradooda.
Rajadii horyaalka ee Liverpool ee sannadkii 2014 ayaa dhimatay markii uu kufay Gerrard kulan ay la ciyaarayeen kooxda Chelsea.
Kufitaankaas ayaa u ogolaaday Demba Ba inuu dhaliyo goolkii Liverpool looga badiyay ciyaartaas, waxaa horyaalka labo dhibcood uga qaaday Manchester City.
Laakiin halyeeyga Reds Carragher oo 41 sanno jir ayaa sheegay in xiddigii ka horjoogsaday hanashada horyaalka inuu ahaa weeraryahan Luis Suarez kaasoo ganaax ku maqnaa bilowgii xilli ciyaareedka ka dib markii uu qaniinay daafacii Chelsea Ivanovic xilli ciyaareedkii ka horeeyay.
Carragher ayaa u sheegay Sky Sports: “Waxba kama ogeyn arintaa laakiin markii aan qolka labiska ku laabtay waxaa i soo gaartay in Luis uu qaniinay Ivanovic.
“Qof ayaa weydiiyay waana uu beeniyay. Waxaan qabaa in arintaas ay keentay in Liverpool ay ku guuleysan weyso horyaalka xilli ciyaareedkii ku xigay.
“Suarez waxaa la ganaaxay shan ama lix kulan xilli ciyaareedkii ku xigay. Suarez waxa uu ahaa xiddigii ugu fiicnaa horyaalka, waxa uu gool dhalinayay kulan walba.
Previous articleShirka xeer ilaalinta dalka oo ka furmaya Baydhabo
Next articleDiyaarado dagaal oo laga iibiyay Kenya